Indawo ezigcina amandla ezihlaziyiweyo zoVimba
Udidi: Izitokhwe zamandla ezihlaziyiweyo
Ixabiso lesabelo sokuqala selanga sokufudumeza kwisiseko sombuso wentando yesininzi
Ukuhlaziywa: 6 January 2021
I-Solar yokuqala (i-FSLR) inyuke nge-5% kulandela ilahleko yayizolo ye-9% njengamathuba e-Democrat elawulwa yi-Senate yase-US, iqhubeka ngakumbi ukuphucula imbono yamasheya ahlaziyekayo.
Kunye Isihlalo seNdlu yeeNgwevu yaseGeorgia esele ibizelwe iiDemokhrasi kwaye okwesibini kujongeka kunokwenzeka ukuba kuthathwe ngumongameli onyuliweyo weqela likaJoe Biden, iimarike zokulingana zibeka ngokufanelekileyo.
Umenzi weepaneli zelanga Isolar yokuqala Ufumene kwakhona ngokuqine okomeleleyo ukusukela oko Matshi 2020 kunyibilika kwiimarike. Nangona kunjalo, iinzuzo azikhange zikufutshane nokubetha njengoko kubonwe phakathi kwezinye izinto ezihlaziyiweyo zamandla esitokhwe, ngokukodwa kwicandelo lezithuthi zombane (EV).
I-Solar yokuqala inyuke nge-77% kunyaka ophelileyo kodwa ithelekisa ne-740% ye-Ella Musk's Tesla kunye nokunkcenkceshela ngakumbi i-1,100% ye-NIO EV automaker yase China.
UGoldman umuncu kwiSolar yokuqala
Isizathu sokwehla okubukhali kwixabiso lesabelo kwi-First Solar izolo yayikukuncipha kweGoldman Sachs, ekufanele ukuba ungene kuyo.
UGoldman ubona umvuzo ngesabelo ngasinye (i-EPS) esihla nge-17% kulo nyaka uzayo, ngo-2020 emele “incopho” ye-EPS kwinkampani.
Ngokwahlukileyo, ingalo yotyalomali yebhanki yotyalo mali icinga ukuba oontanga bayo baya kukhula i-EPS ngama-20 ukuya kuma-30% kwiminyaka ezayo.
Inxalenye yenkcazo yoko luxinzelelo kumaxabiso athengisa iimodyuli zayo ngenxa yokuphelelwa liCandelo lama-201 eerhafu zelanga, ngoxinzelelo olongezelelekileyo kumaxabiso avela kunyuso lonikezelo lwemodyuli kulo lonke ushishino.
UGoldman ubona ngcono i-mileage yeembuyekezo ezivela kukhuphiswano lokuqala lweSolar ezinje nge-Enphase Energy, ephuculweyo ukuba ithengwe. Ngeli xesha, lisike ixabiso ekujoliswe kulo kwiSolar yokuqala nge-20% ngexabiso lokuvalwa ngoMvulo, ukuya kuthi ga kwi-81 yeedola.
Sicinga ukuba uGoldman unayo yonke into engalunganga- nasi isizathu.
Umtshintshi womdlalo wonyulo
Iziphumo zonyulo ezivela eGeorgia zitshintshile ukuguquguquka kwamaxabiso kwesinye isimbaji.
Ukusukela oko u-Biden wonyulo lukhetho luka-Mongameli oluvuselelekayo luye lwaphuma phezulu, nge-Invesco Solar ETF (TAN) ebuyisa i-234% ngokuphela konyaka-eqaqambisa ubukho bokusebenza ngokuqaqamba kweSolar yokuqala.
Kodwa sicinga ukuba iSolar yokuqala inezinto ezithile ekufuneka izenzile kwaye iziqinisekiso ezitsha ezivela kwiiDemokhrasi ezilawula amasebe amathathu karhulumente wase-US ziya kuphakamisa zonke izikhephe kwicandelo elihlaziyiweyo.
Ukongeza, iziphumo ezisikwe ngabakwaSaudis kunye nokubuyiselwa kwesiqingatha sesibini kuqoqosho lwehlabathi, kunokubona ukunyuka okuzinzileyo kumaxabiso eoyile ekrwada. Ixabiso eliphezulu leoyile liphucula indawo yokukhuphisana yamandla elanga kubasebenzisi bamandla.
UJP Morgan uyavumelana nathi. Iphakamise ixabiso layo ekujoliswe kulo kwiSolar yokuqala ukusuka kwi- $ 101 ukuya kwi- $ 105 ngomhla wama-23 kuDisemba, ngesiseko sokudluliswa komthetho oshukumisayo yiCongress kunye nokunyusa imfuno yokufakwa kwelanga eChina, engazukuhlangatyezwa ngabavelisi basekhaya kuphela.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba iSolar yokuqala ayenzi nje iimodyuli ze-photovoltaic (PV), kodwa kunye neenkqubo zamandla elanga ezizisebenzisayo. Ikwanomlenze wesithathu ekusebenzeni kwayo ngohlobo lokusebenza kunye neenkonzo zokugcina ezibonelela ngokuphelisa abasebenzisi bezi nkqubo zamandla.
Uqoqosho lobuzwe obuluhlaza ukukhanyisa iSolar yokuqala
Kukho enye into ebalulekileyo enesisindo sokuthandwa lilanga lokuqala kwaye yile yokuba yeyona mveliso inkulu eMelika.
Ezona ziphezulu zine zepaneli zelanga zonke zibekwe e-China (JinkoSolar, JA Solar, Trina Solar kunye ne-LONGi Solar). Kwindawo yesihlanu yiCanada yaseKhanada Solar kwaye kwindawo ye-10 yiSolar yokuqala.
Njengomenzi ophambili wase-US silindele ukuba iiDemokhrasi zikhuthaze ii-odolo ezivela e-US ukuba zibuyiselwe indlela-ubuzwe boqoqosho ayisiyonto nje kaTrump.
Yongeza koko umfutho osemva komxholo wotyalo-mali kwindalo esingqongileyo, kwezentlalo nakulawulo kwaye ubonelela ngakumbi nge-ballast kwisitokhwe selanga.
Iziphumo zokuqala zeSolar Q4 2020 zibangelwe nge-18 kaFebruwari, ke siyakufumana isiphatho esingcono ngelo xesha malunga nendlela intengiso ehamba ngayo nokuba ijongeka ngathi iGoldman izakulunga malunga nokukhula okubuthathaka kunokulindelweyo kwe-EPS.
Abo bathenga ngoku bajonge ixesha elifutshane Inzuzo yorhwebo Banokucinga ngokuthengisa ngaphambi kweziphumo, ngelixa abatyali zimali bethatha umbono omde kufuneka babambe nakuphi na ukuphazamiseka ngamehlo kumfanekiso omkhulu ochazwe apha ngasentla.
Kodwa okona kugqityiweyo kwi-EPS kuya kuvela ekuphelisweni kokhuseleko lwamaxabiso njengoko uGoldman esitsho ngokuchanekileyo, kodwa loo nto ayizukwenzeka de kube ngu-2022-ixesha elininzi kulawulo lweBiden lokunyusa ulwandiso okanye amanye amanyathelo okomeleza abavelisi baseMelika. Ulawulo lweerhafu lwaziswa nguMongameli uTrump kwi2018.
Uqikelelo lweenyanga ezili-12 u-P / E weSolar yokuqala yi-25.8 ngokweStockopedia, ngelixa kumda osebenzayo ikwindawo ye-10 kwezingama-31 zeenkampani kwimarike yamandla ahlaziyekayo, okuthetha ukuba oontanga bayo iphakathi kwezona zinokubona ukuthengisa. Ingeniso iwela kumgca osezantsi, ke eso sesinye isizathu sokuba ungabi nathemba malunga ne-EPS.
I-Solar yokuqala ibhalise lonke ixesha eliphakamileyo ngama-302 nge-12 kaMeyi ka-2008 kwaye okwangoku ixabiso liyi- $ 97, inyuke nge-5.3% ngexesha lokubhalwa.
Amakhandlela okuqala osuku olu-1, nge-6 kaJanuwari 2021 (itshati ngoncedo lweStockopedia)
I-Solar yokuqala ihleli kakuhle ngaphezulu kwamafu e-Ichimoku (jonga itshathi engentla), ngaphandle kuka-Septemba no-Okthobha, ebonisa inkxaso yenkxaso kumanqanaba amaxabiso akhoyo nakwixesha elizayo.
Le stock iyathengwa.
tags Izabelo ze-ESG, Isolar yokuqala (FSLR), Izitokhwe zamandla ezivuselelekayo, Amandla esola